ट्रम्प मौसम परिवर्तन मा आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न सक्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
डोनाल्ड ट्रम्प ऊ धेरै क्षेत्रमा धेरै लोकप्रिय पात्र बनिरहेको छ। तर निस्सन्देह सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा यो हो कि उनले निश्चय गरे कि उनको देशले पेरिस सम्झौतासँग कुनै सरोकार राख्दैन। यद्यपि, अब अवस्था परिवर्तन हुनसक्दछ।
मौसम परिवर्तन र यससम्बन्धमा सम्बन्धित सबै कुराप्रति आशंकित यस व्यक्तिले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई यस कुराको आश्वासन दिए म केहि महिना को लागी समाधान खोज्ने कोशिश गर्छु। के यो साँचो हो? हामीलाई थाहा छैन। तर यो अझै उत्सुक छ कि उसले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्यो, यदी उनीसित छ भने, यति छोटो समयमा।
पेरिस सम्झौता, जुन १ 195 countries देशले डिसेम्बर २०१ in मा हस्ताक्षर गरेको थियो र २ 2015 सम्ममा अनुमोदन गरिएको थियो, ऐतिहासिक क्षण हो। त्यस्तो अवस्थामा जब कुरा अन्ततः सुधार हुन थाल्छ र मौसम परिवर्तनलाई रोक्न वास्तवमै प्रभावकारी कदम चालिनेछ। तर चीजहरू गलत भए जब संयुक्त राज्यका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पेरिस सम्झौताबाट तपाईंको देश निकास घोषणा गर्‍यो जुन २०१ 2017 को सुरूमा।
केही आश्चर्यचकित भएनन्, किनकि ट्रम्प सधैं आफ्नो अभिप्रायको बारेमा स्पष्ट छन्। वास्तवमा, अनुसार देश उनको दिनमा, उही राष्ट्रपतिले उनको लेखेका थिए ट्विटर खाता निम्न वाक्यांश: ग्लोबल वार्मिंगको अवधारणा अमेरिकाको निर्माणलाई गैर प्रतिस्पर्धी बनाउन चिनियाँले बनाएको हो। त्यसो भए अब के भइरहेको छ?
उनको दिमागले दुर्भाग्यवस हामीलाई कुनै विचार छैन। के उसले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्यो? के यो युरोपमा पनि अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने रणनीति हो? अहिलेको लागि हामी केवल यति मात्र भन्न सक्छौं कि म्याक्रोन र ट्रम्पको बिचको वार्तालापमा उत्तरार्द्धले भने सम्झौताले उद्योगलाई खतरामा पार्छ र विश्वको मुख्य प्रदूषण गर्ने देशहरू जस्तै चीन र भारतसँग ढिलाइ भएको छ.
हामी अन्तमा के हुन्छ हेर्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » ट्रम्प मौसम परिवर्तन मा आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न सक्छ
स्पेनमा तापमानको नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड